Olee otu aru gi si eme ujo? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Kedu ihe na - eme ma ụjọ jide gị - azịza dị mfe nye ajụjụ
Kedu ihe na - eme ma ụjọ jide gị - azịza dị mfe nye ajụjụ
Olee otu aru gi si eme ujo?
Ozugbo ị mataraegwu,nke giamygdala (obere ngwa naiheetitinke gịụbụrụ) na-arụ ọrụ. Ọ na-enyere anyị akanke giusoro ụjọ, nke setịpụrụaru gi si azaghachin'ime ngagharị. A na-ewepụta homonụ nrụgide dị ka cortisol na adrenaline.Gịọbara mgbali elu na mmụba obi.
N'isiokwu a, ị ga-amụta iji hụ 'ụgha ahụ' ihe egwu dị 'na nzaghachi ụjọ nke ahụ nwere ike ịkpalite mgbe ịnọ na nchekwa. Will ga - amụta etu ị ga - esi mee ka ụjọ tụlee gị, m ga - egosikwa gị ụfọdụ ọrụ aka ga - enyere gị aka inwe ntụkwasị obi mgbe ịnọ na nchekwa, ọbụlagodi mgbe uche gị na - agha ụgha na ịgwa gị na ọ bụghị. N'akụkụ a, mmega ahụ dị ezigbo mkpa.
Akụkụ a bụ ahụmịhe, ọ bụ maka ahụmịhe na mmemme ndị a ma ọ bụghị naanị iche echiche banyere m na-agwa gị. Ya mere, ahapụghị mmega ahụ. M hụrụ n'anya na-eke echiche ike ọdịnaya, ma ọ na-ewe a otutu oge na-arụ ọrụ, ya mere, ọ na-ewe m n'ebe ọ bụla si 20 na 30 awa na-emepụta m nkezi 15-nkeji isiokwu, otú ahụ ka m ga-enwe ike ime ya ma nyefee. n'efu na youtube na-enweghị ndị nkwado m.
Ndị na-akwado edemede a bụ Carvana, ụlọ ọrụ na-agbanwe usoro anyị si ere ụgbọ ala anyị. You na-eche ihe ụgbọ ala gị ugbu a bara uru mana ị maghị ebe ị ga-amalite? Chefuo nsogbu nke ichọta maka onwe gi ma egbula oge iga na ndi ahia ma soro ndi na ere ahia nweta ego. Na Carvana ị nwere ike ịchọpụta ego ole ụgbọ ala gị bara.
Ihe ị ga - eme bụ itinye nọmba akara ikike gị ma ọ bụ nọmba chassis ma ọ ga - eju gị anya ịhụ na ọnụahịa ụgbọ ala ejirila karịa ugbu a karịa. N'adịghị ka weebụsaịtị ndị ọzọ, nke a abụghị atụmatụ, onyinye ị ga-enweta bụ ezigbo, onyinye siri ike Carvana ga-azụ ụgbọ ala gị. Yabụ ọ bụrụ na ị nabata onyinye a, Carvana ga-abịakwute gị, mee nyocha ụgbọ ala gị ọsọ ọsọ n'ụlọ gị, wee dee gị ego na saịtị ahụ.
Can nwere ike ịme ihe a niile 100% n'ịntanetị n'ekwughị onye na-ere ụgbọ ala ejizi. Ọ na-ewe naanị nkeji abụọ. Gaa getcarbana.com/therapyinanutshell ka ịmalite.
Nwere ike ịhụ ihe onyinye gị bụ, ma ọ bụ ị nwere ike ire ụgbọ ala gị. Ọ dịịrị gị, Carvana agaghị enye gị nsogbu ọ bụla. Carvana azụrụla ihe karịrị 200,000 ụgbọala n'aka ndị ahịa.
Iji sonyere ndị ahịa a, pịa njikọ na nkọwa m wee nweta ọnụego gị taa naanị n'ime nkeji abụọ. Aga m eketa otu akuko site na Nchegbu Nchegbu. Ka m kpọọ gị ka ị nwee nnwale nnwale ka ị hụ otu ị ga - esi metụta mmetụta gị.
Gbaa mbọ hụ na ịnọ n’ebe nchekwa na ntụsara ahụ ebe ị nwere ike imechi anya gị maka nkeji ole na ole. Gbado anya na ahụ gị dị ka a ga - asị na uche gị bụ radar ma ọ bụ sonar beam jiri nwayọ na - enyocha na ala. Rịba ama ma ị na-enwe nrụgide, esemokwu, ma ọ bụ nkasi obi n'ebe ọ bụla n'ime ahụ gị.
Ugbu a, ka anyị lelee ya n '0 ruo 10, na 0 enweghị esemokwu yana 10 bụrụ nsogbu niile ị nwere ike ịnagide. Ebee ka ị ga-agụkọ ọkwa esemokwu ahụ gị n'oge a? Ugbu a chee na ị na-ama ụlọikwuu n'ime ọhịa n'etiti abalị wee chọọ ịga ụlọ mposi, yabụ yikwasị uwe ụfọdụ ma gbanye ka ị ghara ichegbula onye ọ bụla. Ọ bụ ọchịchịrị kpamkpam na-enweghị ọnwa na ọ ga-ewe gị oge ịchọta ọkwa dị larịị, mana ị nwere ike mechaa ihe ị ga-eme.
Mberede ahụ agafeela, ị ghọtara etu ọchịchịrị si dị ma ị bido ileghachi ụzọ gị laghachi n'ogige, na-esetị aka gị ka ị ghara ịbanye n'ihe. Na-asụ ngọngọ n'elu mgbọrọgwụ osisi na nkume, na-ewere ncha ole na ole site na alaka ndị a na-adịghị ahụ anya. Mgbe obere oge gasịrị, ọ dị gị ka ị gafeelarị ogologo oge ma ị ga-ahụrịrị ebe obibi gị.
Ọ bụ oyi na ọchịchịrị na ị na-eche ụdị iru ala. Start bido na-eje ije n’ụzọ dị iche ma otu oge gachaa nke ọzọ, mgbe ahụ ị ga-achọpụta na ị furu efu. I jiri nwayọ kpọọ gị nwayọ, ma o nweghị onye zara gị.
N'ikpeazụ ị na-eji olu ike, ma ị nweghị azịza ọ bụla. Abalị na-agba ọchịchịrị ma na-ajụkarị oyi, ị na-eche na ọ bụ naanị gị. Ka ị na-eche ihe ị ga-eme eme, mkpọtụ mkpọtụ nke oke ọhịa ahụ na-amachapụ jụụ na mberede, ị nụrụ ihe na-agagharị n'ọhịa dị nso, ọ na-ada ka ihe buru ibu wee bịakwute gị.
Ugbu a, kwusi maka nkeji ma nyochaa ahụ gị ọzọ. Ebee ka ị ga-akwụ ụgwọ ọkwa esemokwu gị ugbu a na ọkwa a site na 0 ruo 10? Ugbu a were ya na ị nụrụ ka ezigbo enyi gị na-akpọ gị aha gị site na ngalaba alaka ndị na-agbaji. Ọ bụghị anụ ọhịa bea, ị nọ ná nchebe.
Rịba ama na esemokwu gị ga-apụ ozugbo ma ọ bụ ma ọ bụrụ na enwere mmetụta ndị na-adịru nwa oge. Onye edemede ahụ kwuru, sị, 'Ana m arịọ mgbaghara maka ịtụ gị ụjọ, mana isi okwu bụ, ọ bụrụ na iwe were gị ma ọ bụ tụọ ụjọ, ọ bụ n'ihi na ị nwere ezigbo echiche ma nwee ike ịhụ etu o si sie ike n'ahụ gị. 'Mgbe anyị chere na anyị nọ n'ihe egwu mana anyị nwere nchekwa, ahụ anyị na uche anyị na-ewepụta otu nzaghachi anụ ahụ dịka a ga - asị na anyị nọ n'ihe egwu anụ ahụ.
Brainbụrụ anyị na-egosi ahụ anyị iji gbapụta adrenaline ma kpalite azịza ọgụ-ụgbọ elu. Anyị na-eme ya ọtụtụ oge nke na anyị amaghị na anyị na-eme ya. Odi mma, werenu nkeji ise weputa otu mpempe akwukwo ma zaa ajuju a.
You kwenyesiri ike na 100% ugbu a? Gaa n'ihu ma tọọ oge nkeji ise. Mgbe a jụrụ m banyere nke a na ogbako, echere m na mbụ 'ee, enwere m nchekwa', mana mgbe m were oge m chere, 'Ọ dị mma, onye ọ bụla n'ime ndị a nwere ike ibuso m agha, enwere ike inwe ala ọma jijiji ma ọ bụ ọkụ' Hel, enwere ike nwee ọrịa kansa ma ọ bụ nje nke nwere ike igbu m n'otu oge, 'ị maara, n'oge na-adịghị anya, uche m mepụtara ụzọ ndị a niile na m nwere ike ịnọ n'ihe egwu. Ndi ozo no na ulo oru ahu biaputara azịza yiri ya, azịza ya bụ mba, ejighi m n'aka na enwere ọtụtụ ihe nwere ike igbu anyị n'oge ọ bụla.
Onye nduzi ahụ jụrụ anyị ajụjụ banyere ya. Ajuola m gi ma inwere nchekwa na odinihu ma obu ugbu a? Ihe ize ndụ ndị a niile m nọ na-eche abụghị ihe na-eme, nchegbu m kpatara ha n'isi m. Ihe ndị a abụghị egwu, kama ọ bụ iyi egwu egwu, ihe egwu nke uche anyị nwere ike iche n'echiche mana nke ahụ anyị agaghị agbanahụ.
Anyị enweghị ike ịkwado ha n'ụzọ anụ ahụ n'ihi na ha adịghị adị. Bụ ihe ndapụta, ọ bụghị? Nke a na - eduga n’inwe mmetụta ụjọ. Nsogbu nchegbu na PTSD na-adapụta mgbe uche anyị na-eme ka ahụ anyị kwenye na anyị nọ n'ihe egwu mgbe anyị nwere nchekwa.
Anyị na-ahụ ihe egwu na ọrụ anyị na njem anyị na mgbe anyị na-agụ akụkọ. N'adịghị ka ụmụ anụmanụ, ụbụrụ anyị dị ike nwere ike ịchọpụta ihe egwu dị n'ọdịnihu nke ahụ anyị na-eme ugbu a. Nke a na-eme ka anyị na-agbagharị ụbọchị anyị, na-ekwusi ike na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị inwe nchekasị oge niile.
Anyị nwere ike ịchọpụta nrụgide mana anyị amaghị ihe kpatara ya. Ọbụna ọrụ ịnọ otu ebe na-eme ka ike gwụ anyị n'ihi na ahụ anyị na-agba ọsọ marathon na nchekasị n'ụbọchị nke na-agụnye ụba obi, iku ume ngwa ngwa, na ọbara mgbali elu. Mgbe anyị nwere nrụgide na-adịghị ala ala, ọ naghị enyere anyị aka ịnọ na nchekwa, ọ na-ebelata nrụpụta.
Nsogbu na-adịghị ala ala na-eme ka anyị rịa ọrịa, ọ na-egbochi iche echiche na ọ na-agbagọ echiche anyị banyere ụwa. Ọbụna n'ọgụ, ọ bụrụ na ị dị oke egwu ma nwekwaa ike, ikekwe ị gaghị adị ire na ọgụ ahụ dị ka a ga-asị na ị dị jụụ ma chịkọta. Ime ihe nwayọ, ịkpachara anya mee ihe ga-enyere anyị aka ịchekwa ahụike anyị.
Yabụ ị na-eme nke ahụ Chee echiche gbasara ihe egwu nwere ike ime ma ọ bụ nwee ike ime mana onweghị ihe ị ga - eme? Oge ụfọdụ a na m eme ya, ma mgbe m gụsịrị akwụkwọ ahụ enwere m ike inye ya aha. A maara nke a dị ka ihe ize ndụ a hụrụ. Yabụ kedu ihe bụ nchekasị gị, nke kwesịrị inyere gị aka, na-emetụta arụpụtaghị gị? Can nwere ike ide nke a na akwụkwọ ọrụ ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị nọ na YouTube, dee na ngalaba nkọwa.
Anyị nwere ike ịgwọ ọrịa site na ụjọ na nchekasị mgbe anyị mepụtara nchebe wee ghọta na anyị nwere nchekwa n'ezie na ebe a na ugbu a. Cheta na sistem ụjọ anyị nwere steeti abụọ - mmeghachi omume ọmịiko, nzaghasị ọgụ-ọgụ, na mmeghachi omume ọmịiko, izu ike na nzagha nri. Anyị na-ewusi akụkụ anyị na-ejikarị ike.
Yabụ iji mepụta nchedo na ịdị jụụ, anyị kwesịrị ịgba ume maka usoro ụjọ ụjọ, usoro ụjọ dị jụụ, ma anyị na-eme nke a n'ụzọ abụọ: nke mbụ, anyị mepụtara nchebe n'uche anyị, gbanwee echiche anyị banyere ọnọdụ na ọnụọgụ abụọ bụ. okike nke nchekwa na aru anyi site na igbanwe mmeghachi omume nke aru anyi na onodu site na ntinye aka. Anyị ekwuolarịrị otu ị ga - esi mepụta nchekwa na ahụ gị site na ịhazi onwe gị. N’isiokwu a ị ga-amụta etu ị ga-esi gbanwee echiche gị gbasara ọnọdụ, mgbe ị gbanwere obi gị, ị gbanwere etu ahụ gị si eme.
Yabụ ihe mbụ ị mụtara bụ ịchọpụta mgbe ị chere na ị nọ n'ihe egwu, mana ị nweghị nchekwa. Ugbu a, ka anyị gaa n’ihe mmuta ọzọ. Were nkeji atọ dee ihe ndị na-eme ka obi na-ajọ gị njọ.
Tọọ oge nkeji atọ, gbaa mbọ wee mee mmega ahụ. Legharịa anya na isi ihe ndị a, anyị n'ozuzu ya amaghị, mana ihe kpatara ọnọdụ ndị dị na mpụga jikọtara na nzaghachi nrụgide bụ n'ihi nkọwa anyị na ha na-eyi egwu nchekwa anụ ahụ anyị. Kedu ka ị si ahụ ihe na ndepụta gị dị ka ihe iyi egwu? Anyị ghọtara ọnọdụ ahụ na azịza ya ma tinye nkọwa gị n'etiti.
Yabụ ọnọdụ ahụ nwere ike ịdị ka nke a: Onye isi gị na-enye gị nzaghachi, mmeghachi omume ahụ bụ ọmịiko, iwe, ma ọ bụ nwee anya mmiri. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnwere nyocha ọrụ, kedu nkọwa ya nke dị n'etiti na-eduga ụbụrụ m ka ọ kpalite nzaghachi ọgụ-ụgbọ elu, nzaghachi nke nrụgide ma ọ bụ iwe, ma ọ bụ olulu nke afọ gị, nri? O nwere ike ịbụ ihe iyi egwu a na-ahụ anya, egwu nke ịhapụ ọrụ m, mgbe ahụ ego ga-agwụ m ma ụnwụ. Nke a bụ ihe atụ nke iche echiche, ọbụlagodi ihe na - eme, na anyị nọ n'ihe egwu ma ọ bụrụ n'eziokwu na anyị enweghị nchekwa.
Anyị anaghị achọpụtakarị na nke a bụ otu anyị si eche, mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchịkwa mmetụta anyị, anyị kwesịrị ịlaghachi na nhazi nke mmetụta uche - nke a bụ nzaghachi ihe egwu anyị na-enyocha. - Kedu ihe m hụrụ dị egwu? Mgbe ahụ, anyị kpebiri ime ihe otu ma ọ bụ karịa n'ime ikike ndị a, anyị gbanwere nghọta anyị ma ọ bụ anyị gbanwee mmeghachi ahụ anyị ma ọ bụ ime ihe. Yabụ mgbe anyị gbanwere nghọta anyị chere na onye isi m agaghị achụ m n'ọrụ, m na-emebiga iwe ókè, ejiri m n'aka na m dị mma, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị gbanwee mmeghachi ahụ anyị n'ụzọ ziri ezi, anyị na-eme ka usoro ụjọ ahụ dị jụụ ma ọ bụ Anyị na-ejide usoro iji dozie nsogbu, dịka
B: 'Oh, enwere ike na anaghị m edobe akụkọ ahụ n'oge, aga m eme nke ahụ ugbu a.' Ka m nye gị ihe atụ ọzọ. Ihe na-ebute di m nnukwu nsogbu bụ mgbe ụmụ m na-eme nnukwu mkpọtụ.
Anyị niile na-arụ ọrụ n'ụlọ n'oge ọrịa a na-ara ara, na oge ọ bụla ụmụaka na-eti mkpu ma ha nwere obi ụtọ ma ọ bụ iwe, ọ na-ebute nzaghachi ahụ na-enye nsogbu. Mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka iwe, mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka iwe. Kedu nkọwa ya n'etiti? Kedu ihe ntụgharị dị n'etiti ya na-eso akpata nzaghachi nrụgide a? Ọfọn, mgbe ị nụrụ ka ụmụ gị na-eti mkpu, ị nwere ike ịtụ ụjọ na ha ga-emerụ ahụ, ma ọ bụ na ị na-atụ ụjọ na ha ga-emerụ onye ọzọ ahụ, ma ọ bụ ị nwere ike ịtụ ụjọ na ha ga-emetụta ike gị ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ha na-emetụta ike gị ịrụ ọrụ Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkpata ego, mgbe ahụ ị gaghị enwe nri ma ụnwụ ga-agụ gị, nri? See na-ahụ ka ihe ndị a niile si bụrụ mmeghachi omume dị egwu? Otu ihe ahụ na ihe dị mfe dịka ịjụ otu, nri? Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’iwe iwe na iwe dịka ị nọ n’otu ndị enyi ma ha ewezuga gị, ana m ahụ na oge niile ụmụ agbọghọ nọ n’afọ iri na ụma, ọ bụ eziokwu, iwe na-ewe ha maka na ndị enyi ha esoghị ha.
Gini mere nke a ji akpalite mmụọ mmetụ ahụ? A jụrụ ọnọdụ ahụ, mmeghachi omume mmetụta uche dị ka chi m mwute, ụjọ, ụjọ, ekworo nri? Gịnị bụ nkọwa ya n'etiti? ,Bụrụ anyị na-atụgharị ọjụjụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka ihe iyi egwu nke ndụ anyị n'ihi na ụbụrụ anyị oge ochie maara na anyị chọrọ obodo anyị iji dịrị ndụ. Anyị chọrọ obodo anyị na ndị be anyị ka a ghara ịchụpụ anyị, jụ anyị n’obodo anyị ma nọrọ naanị n’agụụ n’ọhịa. Deepbụrụ dị omimi anyị na-ahụ ihe egwu mgbe niile, ọbụlagodi mgbe anyị nwere nchebe n'ezie.
Ugbu a, ị chetara ịkpọ ya aha iji zụọ ya? Mgbe anyị na-aghọtaghị na anyị na-enwe nzaghachi 'ihe egwu', anyị na-eche na ọ karịrị anyị njikwa. Ọ bụrụ na anyị akpọ ha aha, anyị nwere ike ịme ihe banyere ya. Yabụ mgbe anyị kwuru okwu dịka 'ihe egwu' na 'nchekwa' anyị nwere ike ịkọwa ọnọdụ na mmeghachi omume anyị.
Anyị nwere ike ịmepụta nche echetara echekwa na ụzọ abụọ na nchekwa n'ezie site n'ịzụsi uche anyị ike ịjụ nkọwa ndị a. Ya mere kwuo ihe dị ka, 'Adị m mma, enwere m nchekwa, ma ọ bụ na ọ na-arịọ m obere mgbanwe, maọbụ ọbụlagodi na ọ gbara m ọkụ, nke nwere ike ọ gaghị ekwe omume, agaghị m anwụ agụụ, naanị m ga-ahụ ọzọ ọrụ, m na na na mma. 'Saykọ ihe ndị dị otú ahụ pụrụ inye aka n'ịjụ ajụjụ ndị a.
Nke a bụ ụzọ ọzọ iji chee echiche banyere nzaghachi anyị na-atụ ụjọ nke nwere ike inyere gị aka belata nchekasị na nchekasị. Gini mere ị ji chee na ọ bụ ihe dị ka nkwenye sitere na ndị ọrụ ibe anyị ma ọ bụ ọrụ anyị na-akpalite mmụọ ndụ anyị. N’ihi na agụụ ga-agụgbu ndị agadi ma ọ bụrụ na ihe adịghị ihe ha mere n’ebe ha na-arụ ọrụ ma ọ bụ na a tụpụrụ ha n’osisi ahụ. Otu ihe anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị apụọ apụ bụ ịjụ onwe anyị, sị, 'Ọnọdụ a ọ na-eyi ndụ m egwu n'ezie?' Ọ bụrụ na enwetaghị akụkọ a, a ga m atụgbu agụụ n'ezie? ? 'O buru na iheghariri m nwa oyuo, a ga-esi na agbụrụ m tuo ma ghafee na ozara? Mgbe anyị chetara uche na ahụ anyị na anyị nọ na nchedo, anyị nwere ike ị dajụọ.
O yikarịrị ka nke a ọ ga-enyere anyị aka dezie akụkọ ahụ nke ọma ma ọ bụ mee ka olu anyị daa jụụ mgbe anyị jụrụ nwoke ahụ ụbọchị. Ya mere, were nkeji were mata ihe na-akpata nrụgide wee jụọ ajụjụ ahụ, olee ebe ụjọ ịlanarị dị ebe a? Nke ahụ ọ bụ egwu ziri ezi? Anyị anaghị adabere n'ọnọdụ anyị ka anyị nwee obi iru ala. Anyị na-emepụta nchebe obi n'ime onwe anyị site na iguzosi ike n'ezi ihe.
Anyị na-eme nchedo mmetụta uche na mmekọrịta anyị site na nnọgidesi ike na ọmịiko. Anyị na-eme nchekwa anụ ahụ site na nghọta anyị na omume anyị dị ka achọrọ. Ugbu a, ka anyị jiri ngwa ngwa dee ederede.
Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ezigbo nsogbu, imaatu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nọ na mmekọrịta mmekọrịta ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịnwụ agụụ ma ọ bụ ọ bụrụ na mmadụ na-eyi ndụ gị egwu, nke a anaghị enyere gị aka.
Gbalịa iji nkà ndị a gbanwee echiche gị ma ọ bụ belata nchekasị gị. Amachaghị ọnọdụ ị nọ na ya agaghị arụ ọrụ maka na ọbụghị eziokwu ịsị 'echedoro m' mgbe ịmaghị nke ọma. Kama, gbado anya na ịmepụta nchebe, dịka ọmụmaatụ site na ịwepụta onwe gị n'ọnọdụ a.
N’ezie, ọ ga-aba uru ma ị dajụọ ahụ gị ka o nwee ike ime ezigbo mkpebi ma mee ihe ọ bụla. Ya mere, site n'ịgha mkpụrụ, ịgbara mmiri, na ịzụlite mkpụrụ ndị ahụ nke echiche, mmetụta, na omume ndị dị nchebe, na ilekwasị anya n'oge a, anyị na-egosipụta usoro ụjọ ụjọ anyị na ịzụlite ụzọ mgbatị onwe onye n'otu ụzọ ahụ onye na-eme egwuregwu ga-ewu akwara. Na nchịkọta, enwere ike ịsị na nrụgide na-adịghị ala ala na ọbụna ụjọ na-adịru nwa oge, ịchọrọ oke ma ọ bụ ụjọ bụ ihe egwu.
Ọ bụrụ na ị na-akwụsi ike n'ọmụmụ ihe na ọrụ, ọ bụrụ na ị nweta nzaghachi, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà PST, ma ọ bụ ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị ịkwadebe nri abalị maka ndị ọbịa, ị nwere ike irite uru site na ọdịiche dị n'etiti ihe egwu na-eche na nchekwa n'ezie, kwa ghọta . Mgbe anyị kwenyere na anyị nọ n'ihe egwu, ahụ anyị na uche anyị na-ebute otu azịza anụ ahụ dịka a ga-asị na anyị nọ n'ihe egwu anụ ahụ. Nke a na-eme ka anyị kpọchiri akpọchi na ọgụ-ụgbọ elu-ifriizi nzaghachi.
Otu anyị si eche maka ihe, otu anyị si atụgharị ọnọdụ anyị, na-eme ka anyị nwee obi iru ala ma ọ bụ nrụgide, dabere na otu anyị si eche echiche. Ya mere, ị nwere ike ịzụlite obi dị jụụ na ụjọ site na ịmara na ị na-eche ihe egwu mgbe ị nọ n'ezie na nchekwa, na-enyo enyo maka nkọwa gị, wee jụọ onwe gị, 'Enwere m ihe egwu anụ ahụ ugbu a?' Mgbe azịza ya bụ mba, ụzọ kachasị mma iji chịkwaa usoro ụjọ gị bụ icheta ma mepụta echiche ahụ nke nchekwa. Ya mere ị na-ekwu, 'Nke a dị egwu, mana ejiri m n'aka', wee mee ka ahụ gị dị jụụ, mee iku ume miri emi ma ọ bụ ịgbatị ma ọ bụ ihe ọ bụla ga-eme ka obi dajụọ gị.
Ugbu a, m na-agba gị ume ka ị rụọ ọrụ abụọ na-esote n'ihi na mgbe ị mere ha, ị ga-enwe mgbanwe na ahụ gị, ngbanwe iji zuru ike mgbe ị mere. Ihe omume abụọ a na - ese nchekwa ma na - edekwa ihe dị mma. Dị ka m gosiri gị na mbido ngalaba a, kedu mgbe anyị chere na anyị nọ n'ihe ize ndụ, dị ka akụkọ a na-ama ụlọikwuu, anyị na-emepụta mmeghachi omume a dị egwu na ahụ anyị mgbe anyị mere ọrụ ndị a jikọtara ebe a, anyị nwere ike ịmalite na-egbochi mmetụta ọjọọ nke ụjọ site n’ichetara onwe anyị mmetụta na echiche nke nchekwa, site n’echiche na anyị nwere nchekwa mgbe anyị nọ n’ezi nchekwa.
Anyị na-ekwenye na anyị dị mma n'oge a. Anyi nwere ike igbochi nsogbu ojoo n’egwu site n’ikwu na anyi di n’ezi n’ebe a n’oge ugbu a. Daalụ maka ikiri ma lekọta.
Isiokwu a bụ nkà sitere na Usoro Nkà 30 m, Otu esi ahazi Mmetụta Gị, ebe m na-akuzi 30 nke nka kachasị mkpa iji dozie ịda mba, nchekasị, na imeziwanye ahụike ọgụgụ isi. Nhazi mmetụta uche bụ nkà dị oke mkpa iji na-arụ ọrụ na mmetụta uche siri ike, mana amụtabeghị ọtụtụ mmadụ otu esi eme ya. Ana m etinye ihe omumu ihe omumu obula na YouTube ka uwa nile we nweta ya n’efu.
Watch na-elele edemede ndị a, kesaa ha, nye aka na Patreon na ndị na-akwado m ka ọ mee. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta usoro mmụta niile n'otu ebe -.
Gịnị na-eme mgbe ụjọ ji gị nke ukwuu?
Ihe ka ọtụtụ n'ime azịza nke ụjọ bụ ihe na-adịghị njọ ma ọ bụ na-adịghị emerụ ahụ, na ahụ na-amalite ịmalite ịlụ ọgụ ma ọ bụ gbapụ ụzọ yaọjọọọnọdụ. Ma nakemgwuchaobere ndị mmadụnweepụtara n'ụzọ nkịtị 'egwuịnwụ 'mgbe oke adrenaline na ọgwụ ndị ọzọ na-eme ka obi ghara ịdị na-arụ ọrụ.Ọkt 28 2013
Anyị na-eche na imirikiti n'ime gị ahụla egwu na-atụ ụjọ n'ihu ma ọ bụ zute onye na-ele ihe anya nke ọma n'abalị ma mesịa kwuo n'ụzọ ihe atụ, sị, 'Ijọ tụrụ m maka ọnwụ.' Ọ dịghị onye n'ime unu ụjọ tụụrụ ọnwụ belụsọ na have ga-ekiri ihe ngosi a site n'ofe ili. Ma cheedị na ihe mere gị nke dị oke egwu na ọ bụ ihe a na-apụghị icheta eche, ahụmahụ ahụ ọ ga-atụ gị ụjọ nke na ị nwụrụ ozugbo ahụ? Ì chere na nke ahụ bụ nzuzu? Nke mbu, o yikarịrị ka ị ga-ama ihe kpatara anyị ji atụ ụjọ na mbụ.
Ka anyị kwuo na ị na-atụgharị nkuku mgbe ị na-aga n'okporo ámá na mberede ị ga-eche nnukwu nkịta na-etolite ma dị njikere ịbịakwute gị. Ọ bụrụ n ’ị bụ mmadụ, ma ọ bụ otu n’ime otu nde, obi gị nwere ike itigbu ngwa ngwa ma na-eku ume ngwa ngwa. Ihe ị na-eche bụ ihe mmadụ nwere ike inwe afọ 100,000 gara aga mgbe o chere agịga saber.
Nke a bụ nzaghachi ebumpụta ụwa anyị na-akpọ mgbe ụfọdụ ọgụ ma ọ bụ ụgbọ elu. Nọrọ na-atụ egwu ma ọ bụ na-aga. Ihe na-eme onye a bụ na akụkụ ụbụrụ a na-akpọ amygdala na-arụ ọrụ.
Ọ bụ mpaghara na-akpata ụjọ. Amygdala zigazie akụkụ ụbụrụ ndị ọzọ ozi, a na-akpọ otu ihe hypothalamus. Regionbụrụ ụbụrụ a na - akpali ịhapụ homonụ dịka adrenaline.
Enwere ike ịkpọ nke a adrenaline rosh. Mgbe ahụ gị na-emepụta ihe a, obi gị na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na ọbara na-aga akwara na ụbụrụ gị. Na-amụ anya ma na-eme ihe ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla egwu dị n'ihu.
Ọ bụrụ na ị hụbeghị nke a ma ghara ịtụ ụjọ, ọ ga-abụ na ị ga-anọ na mbara ala a obere oge. Nke a dị mma n'ezie maka anyị n'ọnọdụ ụfọdụ; Ọ bụ ụdị usoro lanarị. Ma ịtụ egwu ọnwụ enweghị isi.
Ọ ga-adị nnọọ mfe ma i were onwe gị tụọ agụ a ma ọ bụrụ nnọọ na ị ga-ada n’ala ma jiri onwe gị sie nri dị ka nri. Mana chee echiche, ị nwere ike ịtụ ụjọ ọnwụ. Ka anyị kọwaa ihe kpatara ya, wee lee ụfọdụ ihe atụ.
Ọ na-agbada na ihe akpọrọ sistemụ ụjọ autonomic, nke pụtara n'ụzọ pụtara ihe na-eme gị n'amaghị ama. O nwere ihe ole na ole ahụ gị na-eme ka ị ghara ịchịkwa n’ezie, otu n’ime ha bụ ihe ị na-eme mgbe ụjọ tụrụ gị. N'ihe banyere nchegbu, mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike ịnwebiga uche ókè n'ihe banyere mmeghachi omume anụ ahụ.
Oke adrenaline, oke obim obi, na oganihu, mmadu puru ida. Ihe ndi mmadu amaghi bu na adrenaline nwere ike igbu mmadu. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike itinye gị n'ọgụ ma ọ bụ ọnọdụ ofufe, ndị sayensị na-agwa anyị na ọ nwere ike ịhapụ nsị n'ime obi, akpa ume, imeju, na akụrụ.
Ọ bụ obi ka r Mana ọ dị mkpa. Mgbagwoju anya ya na ọnwụ mberede nwere ike ịbụ n'ụzọ. Anyị achọghị imenye gị ụjọ, n'agbanyeghị.
Ga-atụrịrị egwu, yana ikekwe na ahụ ike, ịhapụ ịnwụ nke oke egwu, mana ọ na-eme. Wei nti, adrenaline a wɔfrɛ no calcium no wɔ obi koma mu. Nke a nwere ike ọ gaghị abụ ihe dị mma n’ihi na ọ nwere ike igbochi obi gị inwe ike ịkwụsịlata.
Nke a nwere ike iduga na ihe akpọrọ ventricular fibrillation, nke ị nwere ike ịkpọ obi gị, dị ka akpụkpọ ụkwụ na draya drable. Nke a nwere ike igbochi ọbara ịbanye n'akụkụ ahụ gị ma ị nwere ike ịnwụ. Ndị ọkà mmụta sayensị kwuru na ọnwụ adrenaline abụghị kpamkpam n'ihi nchekasị, ndị mmadụ nwụrụ mgbe ha na-emega ahụ ma ọ bụ na-eme ịhụnanya.
Nke ahụ dịkwa obere. Biko adala mba n’egwuregwu basketball ma ọ bụ agba egwu nke ndụ n’ụzọ dị mfe. Ugbu a, ka anyị gakwuo ntakịrị wee lelee ahịrị mbụ nke otu isiokwu na ScientificAmerican na 2009, nke kwuru, 'A Charlotte, NC, nwoke ka eboro ebubo igbu ọchụ nke nwatakịrị nwanyị dị afọ 79 nke ndị uwe ojii kwuru na ya nọ na-atụ ụjọ ọnwụ. ”Aha nke akụkọ a bụ“ Canjọ na-atụ mmadụ? ”Dị ka anyị kwuru, azịza ya bụ ee.
N'okwu a, agadi nwanyị, otu nwoke batara n'ụlọ ya ma tụọ ya egwu ndụ ya, dịka anyị kwurịtara, ọsọ adrenaline kpatara ya ka ọ nwee nkụchi obi wee nwụọ. Scientific American gbara onye isi oche nke ngalaba na-ahụ maka akwara ozi na Brigham na Women'slọ Ọgwụ Ndị nwanyị na Boston ajụjụ ọnụ ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike ịtụ ụjọ ọnwụ, ọ wee daa, 'Kpamkpam, enweghị ajụjụ.' Ọ na-ekwu maka nnukwu ọghọm nke ihe ọ kpọrọ ka usoro ahụ na-aga, nke anyị gwara gị na mbụ gbasara sistemụ ụjọ autonomic na adrenaline, na-agbakwụnye na ọ bụ ezie na nke a nwere ike iduga imeju ma ọ bụ akụrụ akụrụ, ọ bụ naanị ihe gbasara obi mgbe ọ na-abịa ịkwụsị ịnwụ anwụ mara na ha nwụrụ mgbe ha nwere oke agụụ.
O kwuru na e nwere otu ikpe ebe mmadụ nwere oghere n'otu ebe na-egwu golf wee gwa onye otu golf ya: 'Enwere m ike ịnwụ ugbu a.' Nke ahụ bụkwa kpọmkwem ihe merenụ. Ọ na-echegbu onwe ya nke ukwuu na ọtụtụ calcium na-abanye n'ime obi ya na akụkụ ahụ enweghị ike ịnara ya.
N'ajụjụ ọnụ ọzọ, mana oge a na NPR, otu onye ahụ kwuru banyere otu nwoke kụrụ ọkpọ 300 zuru oke wee gwa ndị otu ya, sị, 'Emechara m mee ya.' Ekem enye ama akpa. Ọnwụ obi na-arị elu dara na nnukwu egwuregwu egwuregwu.
Were ya na ị na-ahụ ihe ihe ahụ na-ekwu. Nwoke ahụ kwụ ọtọ ma kụrụ ikuku mgbe a tụpụrụ bọọlụ n’ogige ahụ. Nwoke ahụ dara ada .Anyị chọtara data n'asọmpi bọọlụ mba bọọlụ na Germany na ọnwụ mberede metụtara ya.
Mgbe nke a mere na mba a, ụfọdụ ndị Jamanị nwụrụ n’egwuregwu Jamanị. Nnyocha e mere gosiri na ihe mberede nke ọnwụ mberede ji okpukpu atọ ka elu n'oge ụbọchị Germany nwere egwuregwu. Ọbụna mmasị okpukpe masịrị ndị mmadụ, ya mere kpachara anya maka ọ ecụ okpukpe a.
Nwere ike iche ihe nkiri ọzọ, nke ugbu a mkparịta ụka. “Olee otú o si nwụọ?” 'Ecstasy.' “Rave?” “Ee e, Chọọchị.” Anyị kwuru na ụjọ anaghị atụ gị, mana Scientific American kwuru na ọ bụrụ na nke a nwere ike ịdabara onye nwere ọrịa obi na-adịbu, ọ nwere ike bụrụ ahụike nye onye ọ bụla Ochie mere.
N'ajụjụ ọnụ American Heart Foundation, otu dọkịta gosipụtara ihe Scientific American kwuru. O kwuru na ọ bụ ezie na ọ dị ụkọ, onye ọ bụla nwere ike ịtụ ụjọ ọnwụ, ọbụlagodi ndị na-eto eto, mana nke ahụ ga-ewe gị n'ezie, ụjọ. Ọ dị mma ugbu a ị nụla nke a, anyị chere na anyị kwesịrị ịnwa ịchọta ụfọdụ ebe ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị nwere ahụike siri ike na-atụ ụjọ ọnwụ nwere ike ịchọta ụfọdụ akụkọ gbasara ndị agadi na-atụ ụjọ ọnwụ mana ndị na-eto eto anaghị adị ka ọ na-eme mgbe mgbe.
Anyị chọtara akụkọ BBC banyere otu nwoke mmanya na-egbu na Scotland nke kpebiri ịbanye n'otu ụlọ ahịa ma bibie ya. E kwuru na nwoke nwere ụlọ ahịa ahụ dabara n'ụjọ n'ihi ụjọ. Ọ bụghị nwata, ma ọ kabeghịkwa aka.
Ekwesiri ikwu na nwoke ahu enweela nsogbu n'obi ya n'oge gara aga. Nwa okorobịa ahụ kpatara mbibi ahụ kwupụtara nkwupụta igbu ọchụ ahụ kpatara ya. Mgbe ahụ enwere ikpe ala ọmajiji na LA LA na 1994.
anyanwụ na-echebe uwe ịgba ịnyịnya
N’ụbọchị ahụ, mmadụ iri abụọ na anọ nwụrụ mgbe ala ọma jijiji ahụ mechara. Oge etiti ahụ emeela agadi na 68, mana ọ bụ naanị pasent 42 nke ndị metụtara metụtara ọnọdụ obi dị adị. Anyị lere anya ebe niile ma ahụghị akụkọ ọ bụla banyere ndị na-eto eto na-atụ ụjọ ọnwụ, mana ndị sayensị kwenyere na ọ nwere ike ime.
Ndi akanam ndịk anam fi tutu ekere ke emekeme ndikpa? Gwa anyị na nkwupụta. Ugbu a lee 'Otu ndị mmadụ si achị ọchị na ọnwụ'. Dị ka oge niile, echefula inwe mmasị, ịkekọrịta na ịdenye aha.
Ruo oge ọzọ.
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị na-atụ ụjọ?
Nke a bụ otu esi elekọta onwe gị ma ọ bụrụgị''remmetụtaegwuma ọ bụ mwute ugbu a
Nweta ezigbo ụra abalị.
Rie nri dị mma.
Gbanyụọ nri akụkọ.
Were ngwaahịa nkenke giọnọdụ.
Gwa mmadụ otu esi eme yagị''remmetụta.
Kụ ume site na ụjọ.
Mgbe ụfọdụ mmadụ na-echegbu onwe anyị, mana maka ụfọdụ n'ime anyị ahụhụ na - ata ahụhụ dị iche ma na - ebibi ndụ. Anyị bụ, n'achọghị ịbụ ndị na-enweghị ekele ma ọ bụ ndị na-enweghị isi, ndị na-atụkarị ụjọ, ihe na-eme ka o siere ndị ahụ na-atụ ụjọ ike bụ na anyị enweghị ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe anyị kwesịrị ụjọ na ihe na-akpasu iwe na-akpaghị aka Lee ndị ụjọ na-atụ ụjọ abụghị ndị nzuzu, ha nwere ike bụrụ ndị na-enwu gbaa, naanị na n'otu ebe n'akụkọ ihe mere eme ha, akụrụngwa ọgụgụ isi nke kwesiri ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ihe ize ndụ metụtara Ebibiri ha nwetara nnukwu ụjọ dị ebe ahụ na ugbu a ọmarịcha ihe niile aghọwo ihe na-atụ egwu, ihe ọ bụla na-atụ egwu na-atụ egwu n'usoro na-abụ njedebe nke njedebe enweghị ọkwa ndị ọzọ ebe mmadụ na-amaghị okwu n'ihu ndị nnọchiteanya ahụ mkparịta ụka siri ike na-arụ ọrụ ndị a nwere ike ịjụ ajụjụ kwa ụbọchị na ịdị adị niile bụ nsogbu ka anyị ghọọ ihe atụ immer sed, anyị na-eche na ndị na-atụ ụjọ ga-abụ ndị na-adịghị njikere na-eto eto oge na-enweghị ihe onwunwe iji nagide ha na-ezute na beartart bear bụ ihe na-atụ ụjọ ọ na-ewe iwe ya na-azọda ya na-etipịa ya egwu ibibi ihe niile ọ bụ mmụọ na-apụghị ịghọta N'ihi ya, mkpu nke onye ahụ na-echegbu onwe ya nọgidesiri ike n'ọnọdụ ahụ, ọnọdụ wee rapaara ebe ahụ ebe ọ bụ na ọ baghị uru ịgwa onye ahụ n'echeghị echiche na ọ dịghị anụ ọhịa bea na-agba gburugburu ugbu a, ma ọ bụ na nke a abụghị oge nke afọ, ma ọ bụ na Ọtụtụ bea nwere omume enyi ma ọ bụ na ndị na-ama ụlọikwuu na-ezutekarị ha, nke ahụ dị mfe maka gị ịgwa onye na-ahụtụbeghị mgbe ọ tetara na nnukwu grizzly na-ele gị anya na ezé na-ahụ anya na nnukwu paws na-emeghe igbu nsonaazụ nke ogige a? bụ ọrụ na-enweghị atụ maka mbibi ọdachi nke egwu na-atụ egwu nke anụ ọhịa bea niile kamakwa nke nkịta niile, oke bekee, oke na osa na ebe izu niile na ụbọchị anwụ niile na ọbụlagodi ihe ndị metụtara ya dịka osisi na-agba ọsọ na ifufe ma ọ bụ ahịhịa ndụ ma ọ bụ isi kọfị nke dị tupu ọdịdị nke anụ ọhịa bea ahụ eme ka ndị na-atụ egwu enweghị ike ịkọwa ọdịiche dị iche, ha nwere ike 'itinye egwu na igbe abụọ dị iche iche ịmalite igwu anyị na njem ahụ na ichegbu onwe anyị na anyị nwere ụjọ na-atụ egwu ime ihe nwere ike iche dị nnọọ nke ọma ma eleghị anya ọ dịkwa ntakịrị, iji hụ ihe ha bụkwa ngwá ọrụ ndị a na-apụghị ịdabere na ha nke nwere ike iwepụ ọgụgụ akwụkwọ na-ezighi ezi ma bibie ndụ anyị, anyị ga-eme ọdịiche siri ike n'etiti mmetụta na eziokwu iji ghọta na echiche abụghị pr ognose na egwu abughi eziokwu na otu akuku nke uche gha emeso ndi ozo ihe omuma obi siri ike m maara na ị ji n'aka na enwere bea n'ebe ahụ ma ọ bụ na t okpu akwụkwọ akụkọ okpu ma ọ bụ na nzukọ ọfịs ahụ mana a ga-eti mkpu n'ezie mmetụta n'ezie n'ezie, dị ka a ga - asị na ndụ gị dabere na ya mana anyị anọla ebe a tupu anyị enwee ike ịnabata ma iti mkpu na - aga n'ihu na eleghara anya kpamkpam ọ dị ka ị na-ekiri ụjọ na-apụta ma na-ajụ ịbanye na ọnọdụ ha doro anya, anyị ga-adị ka onye na-anya ụgbọ elu nke ụgbọ elu ọkaibe nke na-ada na autopilot na oke ikuku. The pilot uche ziri ezi nwere ike ịgwa ha na a egwu nkukota dị nso, ma ha mere maara na uzu mere ziri ezi nakwa na otu adụ ọdịda bụ n'ezie na ọ ga-emeghe ka mma, n'agbanyeghị ọchịchịrị na egwu vibrations nke pụtara n'ezie ịtụ egwu bea n'ebe ọ bụla anyị ọ dị mkpa ka anyị nwekwuo oge iji wepụtakwu oge iji chee echiche banyere bea ahụ pụrụ iche anyị hụrụ na njedebe nwụrụ anwụ bụ itinye uche na egwu maka ọdịnihu, mana anyị ga-atụgharịrị echiche anyị gaa n'oge gara aga ma jiri ọmịiko na ọmịiko gaa ebe ndị na-emerụ ahụ.
Ihe si na amaghị ihe nkọwapụta nke ihe na-atụbu anyị egwu bụ ịtụ egwu ihe niile n'ọdịnihu, yabụ anyị kwesịrị ịjụ ihe maka anụ ọhịa bea nke mere anyị, kedụ ka anyị chere na anyị kwesịrị ịkwaga bea ahụ ma weghachite ya mara ya ka imuta? dị ka mmụọ nke mere anyị n'otu oge n'otu ebe ka o wee nwee ike ịkwụsị nsogbu ebe niile maka oge niile anyị na-atụ egwu bụ ọdachi akụkọ ihe mere eme anyị, ihe ịma aka site ugbu a gaa n'ihu bụ ịkwụsị onwe anyị mgbe niile na-enye ihe ọhụrụ iji mebie ezumike nke ndụ anyị na ụjọ anyị nwere ike ịmụta ikike iji nọrọ jụụ, ọ bụghị site na ọpụrụiche ma ọ bụ iku ume ngwa ngwa, mana site n'echiche, akwụkwọ anyị na-eduzi anyị n'usoro a. Pịa ịmụtakwu ihe
Nso idi utịp ndịk?
Egwuna-eme ka usoro ahụ anyị ji alụso ọrịa ọgụ na-ebelata ma nwee ike ịkpata mmebi nke obi, nsogbu nke eriri afọ dịka ọnya afọ na ọrịa obi na-eme mgbakasị, ma belata ọmụmụ. O nwere ike ibute ime agadi ngwa ngwa na ọbụnadị ọnwụ.
Daalụ maka isonyere anyị taa. Anyị ga-ekwu maka mmetụta ọjọọ ụjọ na-ebute na otu o si ejide anyị na ndụ anyị. Taa, anyị na-ekwu maka ụjọ na ọkachasị mmetụta na-adịghị mma egwu.
N'ezie, enwere mmetụta ahụike na-adịghị mma ichegbu onwe gị. Yabụ, ịtụ ụjọ ọ bụ mmetụta uche, mana enwekwara akụkụ anụ ahụ nke egwu.
Yabụ mgbe anyị banyere n'ọnọdụ ụjọ, ahụ anyị na-eme mmegharị site na mgba ma ọ bụ ụgbọ elu a. Nke a bụ akụkụ ụbụrụ ochie anyị ma mgbe anyị nọ n'ọnọdụ ụjọ ọ na - eme ka ụbụrụ anyị hapụ ụfọdụ kemikal. Ugbu a egwu nwere ike ịdị irè ma baa uru n'oge dị mkpirikpi.
O nwere ike ichebe anyị. Nke a bụ ihe ụjọ bụ n'ezie. Ọ bụ iji chebe anyị ma chebe anyị.
Mana anyị bi na ọha mmadụ taa ebe ọtụtụ ụjọ anyị na-atụ bụ ụjọ nwere ụjọ na-abụghị n'ezie. Ma ahụ anyị ka na-azakwa otu ụzọ ahụ maka ụjọ a. Ya mere, ahụ anyị na-ewepụta kemịkal ndị na-edozi ahụ anyị maka ọgụ ma ọ bụ ụgbọ elu.
Mana nsogbu bụ, mgbe enweghị ezigbo ihe iyi egwu, ma ọ bụ mgbe anyị nọ ebe anyị na-atụkarị ụjọ, ọ na-agbanwe ntinye nke kemịkalụ na ahụ anyị. N'ihi na anyị na-anọ n'ụdị ụjọ a mgbe niile. Ya mere, ọ na-amalite ịgwụ ahụ anyị.
Ya mere, n'ihi egwu, anyị nwere ike ịnweta ụdị ahụ ike niile na ahụike na-adịghị mma. N’ihi ya, achọghị m ikwu banyere ya taa. Anyị nwere ike ikwu banyere ya na isiokwu ọzọ.
Mana taa achọrọ m ikwu maka mmetụta ụjọ nwere na ihe anyị rụpụtara na ndụ. Na mmetụta egwu na-emetụta omume anyị. Ya mere, ụjọ bụ mmetụta uche.
Mgbe ị na-eche banyere ya, ụjọ bụ mmetụta nke na-adọ anyị aka na ntị ma ọ bụ gbochie anyị ịme ihe ụfọdụ. Yabụ ọ bụrụ na m gafere ugwu wee kpọda n’elu ugwu ahụ wee hụ na ọ bụrụ na m ga n’ihu na m ga-ada, nke ọma, egwu ịda bụ ihe na-egbochi m ịpụ n’elu ugwu ahụ. Ya mere, ụjọ pụtara iji gbochie anyị ma ọ bụ gbochie anyị ime ihe nwere ike imerụ anyị ahụ.
Ma ọtụtụ ihe na ndụ anyị ka anyị na-ahụ taa nke anyị na-atụ egwu, na anyị chere nwere ike iduga n'ọnọdụ dị egwu ma ọ bụ nwere ike ibute ọnọdụ dị egwu. Ma n'eziokwu ọ bụghị. Ọ bụ naanị nkwenkwe nwere nkwenye na anyị nwere.
Ma ọ bụ ketara ma ọ bụ nakwere ndụ anyị niile. Otu akwụkwọ aha ya bụ The Four Agreements kwuru na ihe ka ọtụtụ n’ihe anyị kweere bụ ihe ndị anyị meburu ma ọ bụrụ na anyị anabata ha. Anyi na emezi ha nke anyi.
Ya mere, anyi ji egwu mee otu ihe ahu. Na mgbe mgbe egwu a adịghị adị. N'ezie, enwere acronym forfear nke pụtara na ụjọ na-anọchi anya Egha Na-egosi Realgha.
Mgbe anyị lere egwu anya n'ezie, anyị na-ahụkarị na ọ nweghị ihe dị ebe ahụ. E nwere okwu ọzọ na-ekwu, sị, 'onjọ kụrụ aka n'ọnụ ụzọ, Okwukwe zara ma ọ dịghị onye nọ ebe ahụ.' Yabụ, mgbe anyị lere egwu anya n'ezie, anyị na-achọpụta na ọ bụghị ezigbo ya.
Ọ dịghị adị. Ma mgbe ahụ, anyị nwere ike ịmanye ọnọdụ a, mepụta omume ma ọ bụ omume ahụ site n'ịghọta egwu ahụ ma mata na ụjọ ahụ adịghị. Know mara, Harvard mere nyocha afọ ole na ole gara aga.
Ha lere egwu ma chọpụta na 93% nke ihe ndị anyị na-atụ egwu na ndụ anaghị eme eme. Anyị enweghị ike ịchịkwa 7% ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ na ị chee maka ya, mgbe anyị kwere ka ụjọ na-achịkwa anyị, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ikwe ka ihe ndị n'ọtụtụ oge anaghị egbochi anyị ime ihe anyị chọrọ ime, enweghị ike ịgbanwe.
Ya mere, lee otu ihe atụ nke na otu egwu si achịkwa anyị ma gbochie anyị ime na ịnweta ihe ọ bụla anyị nwere ike ime na ndụ. Yabụ, afọ ole na ole gara aga, anyị rutere ugwu Zayọn. Nke a bụ aha nke ibugo onu ihe mmụọ ozi ndị mmụọ.
Ọ rịgoro n’elu ugwu wee rute n’otu ebe dị ya ezigbo egwu n’ihi na ị kwụgoro ebe ahụ, ugwu ahụ dịkwa warara. Mgbe ahụ, mgbe ụzọ ahụ gbagoro n'ugwu ahụ, enwere mkpọda n'akụkụ ọ bụla. N'ihi ya, ha nwere agbụ nke a na-agbanye n'ụzọ ị nwere ike ijide.
Nke mere na ị nọrọ n'okporo ụzọ. Ọfọn, n'ụbọchị ahụ pụrụ iche, anyị nwere otu ụmụ akwụkwọ anyị. You na-arịgo akụkụ mbụ nke njem ahụ nke na-adịghị atụ ụjọ kama ọ na-agwụ ike.
Ma mgbe ahụ ị ga-abịa ebe na-emighị emi ebe ị nwere ike izu ike ma zuo ike. Ma ị ga - ahụrịrị njem ezumike nke ị ga - aga. Ọzọkwa, ọ na-eyi ezigbo egwu.
Ya mere, anyị gafere ebe a ma nwee otu ìgwè ndị na-elele ezumike ahụ. Ha nwara ikpebi ma ịga n'ihu na njem ahụ. Na mgbakwunye na ọdịdị nke njem ahụ n'onwe ya, enwere igwe ojii igwe bidoro ịchịkọta na mbara igwe.
Ndị nọ ebe ahụ, n'ihi na anyị letara ha otu nkeji, na-ekwu maka ma ị ga-aga n'ihu na njem ahụ ma ọ bụ na ọ gaghị, gaa n'akụkụ ndị ọzọ, ebe ị ga-atụgharị ma laghachi. Ugbu a, ha na-atụ egwu nke ibugo onu onwe ya. Ma e nwere igwe ojii ndị ahụ bịarutere ma echiche ahụ: 'Chei, gịnị ma ọ bụrụ na mmiri amalite izo? Gịnị ma ọ bụrụ na oké mmiri ozuzo etiwapụ? Gịnị ma ọ bụrụ na ifufe eburu? 'O yiri egwu dị ka ọ dị.
Ọ dị ka ihe dị ize ndụ. Mgbe oke mmiri ozuzo ahụ bịara, ọ nwere ike bụrụ ihe egwu ma ọ bụ ụjọ. N'ihi nke a, otu ndị a kpebiri na ha agaghị aga n'ihu na njem ahụ.
Otu anyi na akuku ya bu n'ihi na emeela m njem a otutu oge. Enweghị m nchegbu na m maara na ibugo onu ihe adịghị mma. Oké ifufe mmiri ahụ enyeghị m nsogbu.
Ya mere, anyi gaara n’uzo wee gawa. Abịarutere n'elu na oké ifufe igwe ojii na-apụ n'anya. Enweghị ifufe, mmiri ozuzo, ma ebili mmiri.
O wee bụrụ ụbọchị dị ebube. Ndi otu ozo kpebiri na ha agaghi aga njem ha n'ihi egwu ihe nwere ike ime. Ya mere ha tufuru ahụmịhe ahụ.
Ya mere chee echiche banyere ya na ndụ. Ugboro ole ka anyị na-atụ egwu maka ihe nwere ike ime gbochie anyị ime ihe na ịme ihe ahụ. Oleekwa otú ndụ anyị gaara adị ma ọ bụrụ na anyị ga-emeri ụjọ ndị a.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ime ihe ndị anyị chọrọ ime. Olee otú ndụ anyị ga-adị iche? Ya mere, m na-agba gị ume ka ị mara nke a. Na ịghọta na 93% nke ihe ndị anyị na-atụ ụjọ anaghịdị eme.
N'ọtụtụ ọnọdụ ebe anyị na-atụ ụjọ, ọ bụrụ na anyị elee egwu ahụ anyị ga-achọpụta na ọ nweghị ihe dị n'ezie. Na egwu a dabere na nkwenkwe na-ezighi ezi. Kama nke ahụ, ana m agba gị ume ịkwụsị ụjọ.
Imirikiti ihe anyị chọrọ na ndụ dị n'akụkụ nke ọzọ nke egwu. Naanị ihe anyị ga-eme bụ imezu ya. Ma mgbe ahụ, anyị ga-enwerịrị ihe niile anyị nwere ike ịnụ ụtọ ha.
Ya mere, banye na egwu gị ma mepụta ndụ ị hụrụ n'anya. Daalụ maka ikiri. Ọ bụrụ na ị hụla edemede ahụ dum, ị ga-enwerịrị obi ụtọ na ya.
Ya mere, m na-agba gị ume ịdenye aha na ọwa anyị wee laghachi echi ma gaa leta anyị.
Gịnị na-akpata ụjọ gị?
Ihe mkpali na-eyi egwu, dị kaihen'anya onye na-eri anụ,triggerskaegwunzaghachi naiheamygdala,nke na-arụ ọrụmpaghara ndị metụtara nkwadebe maka ọrụ moto metụtara ọgụ ma ọ bụ ụgbọ elu. Ọ bụkwatriggersntọhapụ nke homonụ nrụgide na usoro ụjọ ọmịiko.27.10.2017
Beingtụ ụjọ ọ na-eme ka ndụ gị dị mkpụmkpụ?
Nnyocha e mere na-egosi na iwebiga iwe ókè, ichegbu onwe gị mgbe niile, na ibi ndụ mgbe niile na-echegbu onwe gị nwere ike ibelatandụndimmadu. 1 Ọ bụrụ na nke a kọwaranke ginzaghachi nke azịza na ndọghachi azụ kwa ụbọchị, ọ nwere ike ịkwụ ụgwọ ogologo oge iji mụta ụzọ iji mee ka nrụgide dị ala ma belata.
Nwere ike ịtụ ụjọ ọnwụ?
Azịza ya: ee, ụmụ mmadụnwere ikeịbụụjọ ọnwụ. N'ezie, mmeghachi omume mmetụta uche siri ike ọ bụlanwere ikeakpalite kemikal na-egbu egbu, dị ka adrenaline, n'ahụ. Ọ na-eme obere oge, mana ọnwere ikemee onye ọ bụla.
1 na-eme 1 ihe kwa ubochi nke na-atu gi egwu?
Gị'doro anya na ị maara nke ọma banyere'mee otu ihe kwa ubochi na-atu gi ujo. ” A na-ekenyekarị nkwupụta ahụ Eleanor Roosevelt, onye kwuru ihe nwere isi karịa (ma ọ bụrụ na enweghị ike meme)Gịnweta ume, obi ike na obi ike site na ahụmịhe ọ bụlagịn'ezie kwụsị ile anya na ihu na ihu.
Gịnị na-akpata ụjọ?
Uwa niletrigamakaegwubụ ihe iyi egwu nke mmebi, dị adị ma ọ bụ nke e chepụtara echepụta. Ihe iyi egwu a nwere ike ịbụ maka ọdịmma anụ ahụ anyị, nke mmetụta uche ma ọ bụ nke uche anyị. Ọ bụ ezie na e nwere ihe ụfọdụ nana-akpali egwuihe ka ọtụtụ n’ime anyị, anyị pụrụ ịmụta ịtụ egwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla.
Gịnị mere m ji atụ ụjọ na enweghị ihe kpatara ya?
Ihe dị iche iche nwere ike ịkpata nchegbu: nchekasị, mkpụrụ ndụ ihe nketa, onwu ụbụrụ, ọdachi, ma ọ bụ ihe ndị metụtara gburugburu. Enwere ike belata mgbaàmà site na ọgwụ mgbochi nchegbu. Mana ọbụlagodi site na ọgwụ, ndị mmadụ ka nwere ike ị na -eche ụjọ ma ọ bụ ọbụbụ ụjọ.Ọkt 2 2018
Gịnị na-eme n’ahụ́ gị ma ụjọ tụwa gị?
Ihe abụọ a na-akwadebe ahụ́ gị ịnagide nrụgide ahụ. Maka ọtụtụ ndị mmadụ, adrenaline na-apụ mgbe ihe omume mechara, mana maka ụfọdụ ndị ụjọ na-atụ ụjọ, ụdị adrenaline nwere ike ịmasị obi ha nke ukwuu nke na ọ KWOR..
Kedu ihe na-eme ahụ mmadụ n'agbanyeghị egwu?
N'ihe omume na-atụ ụjọ, nke dị adị ma ọ bụ nke adịgboroja, nzaghachi ọgụ mmadụ ma ọ bụ nke ụgbọ elu nwere ike iweghara, nke nwere ike ibute ọtụtụ mgbanwe dịka adrenal glands na-eme n'ihi ụjọ site na ịgafe oke oke, na-eji adrenaline na-ekpuchi ide ahụ.
Gịnị mere ndị mmadụ ji awụli elu mgbe ụjọ tụrụ ha?
Ihe kpatara ya bụ na nzaghachi ma ọ bụ ụgbọ elu na-ewepụta homonụ dị ike nke na-emetụta ahụ dum. Mgbe ụjọ jidere gị, hormone adrenaline na-ejupụta n’ahụ gị. Nke a na-egosipụ obi obi gị na ọbara gị, dị ka Scientific American si kwuo.